သင့်ချစ်သူဟာ သင်နဲ့ ငွေကြေးအရ အဆင်ပြေပါသလား – Gentleman Magazine
သင့်ချစ်သူဟာ သင်နဲ့ ငွေကြေးအရ အဆင်ပြေပါသလား
အိမ်ထောင်မှုဆိုတာ နဖူးစာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စုံတွဲတွေရဲ့ ငွေကြေးသုံးစွဲမှု ပုံစံတွေဟာ သူတို့ အိမ်ထောင်မှုဘဝကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ စုံတွဲတစ်ခု လက်မထပ်ခင် ဗေဒင်တွက်ကြည့်ကြတဲ့ အလေ့ ရှိပါတယ်။ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးကို လိုက်ဖက်ညီမှု ရှိမရှိ ရှေးကျတဲ့ နည်းလမ်းတွေသုံးပြီး တွက်ကြပါတယ်။ ဆေးပညာ ခေတ်မီလာတာနဲ့အမျှ စုံတွဲတွေကို ဆေးလည်း စစ်ကြပါသေးတယ်။
စီးပွားရေးပညာရှင်တွေဟာလဲ ဒီလိုမျိုး လက်မထပ်ခင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုက်ဖက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးကြဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေ အကုန်ကိုက်ညီပေမယ့် ငွေကြေးပြသနာတွေ တက်လာတဲ့အခါ စုံတွဲတွေ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေဖြစ်လာတာကို တွေ့ရှိရတဲ့အခါမှာတော့ လက်မထပ်ခင် ငွေကြေးဆိုင်ရာအမြင်ကိုလဲ စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောဆိုလာကြပါတယ်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာအမြင်ကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ အောက်ပါအချက်တွေကို စဉ်းစားရပါမယ်။
၁. ငွေ သုံးဖြုန်းမှု အလေ့အကျင့်
သင့်ရဲ့ ဇနီးလောင်းဟာ ဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာ ငွေအရမ်းမရှိပဲနဲ့ နိုင်ငံခြားကို အပန်းဖြေခရီး ထွက်ချင်နေပါသလား။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့ အဓိကလိုအပ်တာက စုဆောင်းမိဖို့ပါ။ တစ်ယောက်ခြင်းစီဟာ အနာဂါတ်အိမ်ထောင်ရေးအတွက် ငွေကြေးစုဆောင်းပြီး စီးပွားရှာချင်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် စည်းကမ်းတကျစုဆောင်းလေ့မရှိကြပါဘူး။
ငွေစုဆောင်းဖို့ဟာ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန် စစ်ဆေးသင့်တဲ့အရာပါ။ လစဉ်ဝင်ငွေရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကို စုငွေအဖြစ် စုဆောင်းသင့်ပါတယ်။
၂. အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် ငွေကြေးစီစဉ်မှု
လခစားဝန်ထမ်းတွေဟာ သူတို့လခ ၃ လစာကနေ ၆ လစာအထိကို ငွေသားအဖြစ် လက်ထဲ ထားသင့်ပါတယ်။ အလုပ်ပြုတ်မှာ၊ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရတာ စတဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ ငွေကြေးပြသနာ ကြုံရမှုမျိုး မဖြစ်အောင်ပါ။ လက်မထပ်ခင် ကိုယ်လက်ထပ်မဲ့သူရဲ့ အရေးပေါ်ငွေကြေးစီစဉ်မှုကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။
၃. လက်ထပ်ပြီး ငွေကြေး စီမံခန့်ခွဲမှု
မိသားစုတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့၊ ညီ ညီမတွေကို ကျောင်းစရိတ် ထောက်ပံဖို့၊ အစရှိတဲ့ အချက်တွေကို လက်မထပ်ခင်ကတည်းက ကြိုတင်ညှိနှိုင်းထားသင့်ပါတယ်။ လက်မထပ်ခင်မှာ သင့်ရဲ့ဇနီးလောင်းကို သင့် ထောက်ပံ့စရာတွေ အကုန်ပြောပြထားပါ။ အဲဒါဟာ ကြုံတွေ့ရမယ့် ငွေကြေးစီမံမှုအတွက် ကြိုတင်စဉ်းစားဖို့ အချိန် ရစေပါတယ်။
သင့်ဇနီးလောင်းမှာလဲ ထောက်ပံ့ရမယ့် သူတွေ ရှိနေမှာပါ။ အဲဒါကိုလဲ နှစ်ယောက် လက်မထပ်ခင် ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီးမှ သူ့ကို မထောက်ပံ့ခိုင်းလို့ မရပါဘူး။ မိသားစုဆိုတာ လူ့ကျင့်ဝတ်အရ ထောက်ပံ့ရမယ့်အရာ မို့ပါ။
လက်ထပ်တာဟာ တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ ကြုံရမှာပါ။ လက်ထပ်ခြင်းမှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းအပြင် စိတ်အနှောင့်အယှက်နဲ့ လောကဓံတွေကို သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့ တူတူ ကျော်ဖြတ်ရမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် ဗေဒင်တွက်တာ၊ ဆေးစစ်တာတို့အပြင် ငွေကြေးအမြင်ကိုလည်း စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နဖူးစာကြောင့် ချစ်သူ နှစ်ယောက် လက်ထပ်ရပေမယ့် ငွေကြေးပြသနာကြောင့် ပြန်ကွဲစေနိုင်လို့ပါပဲ။
သငျ့ခဈြသူဟာ သငျနဲ့ ငှကွေေးအရ အဆငျပွပေါသလား
အိမျထောငျမှုဆိုတာ နဖူးစာကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စုံတှဲတှရေဲ့ ငှကွေေးသုံးစှဲမှု ပုံစံတှဟော သူတို့ အိမျထောငျမှုဘဝကို အပွောငျးအလဲ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
အိန်ဒိယမှာ စုံတှဲတဈခု လကျမထပျခငျ ဗဒေငျတှကျကွညျ့ကွတဲ့ အလေ့ ရှိပါတယျ။ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးကို လိုကျဖကျညီမှု ရှိမရှိ ရှေးကတြဲ့ နညျးလမျးတှသေုံးပွီး တှကျကွပါတယျ။ ဆေးပညာ ခတျေမီလာတာနဲ့အမြှ စုံတှဲတှကေို ဆေးလညျး စဈကွပါသေးတယျ။
စီးပှားရေးပညာရှငျတှဟောလဲ ဒီလိုမြိုး လကျမထပျခငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ လိုကျဖကျညီမှုရှိမရှိ စဈဆေးကွဖို့ လိုအပျတယျလို့ ထငျပါတယျ။ ကနျြတာတှေ အကုနျကိုကျညီပမေယျ့ ငှကွေေးပွသနာတှေ တကျလာတဲ့အခါ စုံတှဲတှေ အိမျထောငျရေး အဆငျမပွဖွေဈလာတာကို တှရှေိ့ရတဲ့အခါမှာတော့ လကျမထပျခငျ ငှကွေေးဆိုငျရာအမွငျကိုလဲ စဈဆေးကွညျ့ဖို့ လိုတယျလို့ ပွောဆိုလာကွပါတယျ။
ငှကွေေးဆိုငျရာအမွငျကို စဈဆေးကွညျ့ဖို့ အောကျပါအခကျြတှကေို စဉျးစားရပါမယျ။
၁. ငှေ သုံးဖွုနျးမှု အလအေ့ကငျြ့
သငျ့ရဲ့ ဇနီးလောငျးဟာ ဘဏျစာအုပျထဲမှာ ငှအေရမျးမရှိပဲနဲ့ နိုငျငံခွားကို အပနျးဖွခေရီး ထှကျခငျြနပေါသလား။ ဟုတျတယျဆိုရငျတော့ စိုးရိမျရပါတယျ။ ငှကွေေးဆိုငျရာတိုးတကျဖို့ အဓိကလိုအပျတာက စုဆောငျးမိဖို့ပါ။ တဈယောကျခွငျးစီဟာ အနာဂါတျအိမျထောငျရေးအတှကျ ငှကွေေးစုဆောငျးပွီး စီးပှားရှာခငျြကွတာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ ရညျမှနျးခကျြတှေ အောငျမွငျဖို့အတှကျ စညျးကမျးတကစြုဆောငျးလမေ့ရှိကွပါဘူး။
ငှစေုဆောငျးဖို့ဟာ သတို့သားနဲ့ သတို့သမီး တဈယောကျကိုတဈယောကျ အပွနျအလှနျ စဈဆေးသငျ့တဲ့အရာပါ။ လစဉျဝငျငှရေဲ့ ရာခိုငျနှုနျးတဈခုကို စုငှအေဖွဈ စုဆောငျးသငျ့ပါတယျ။
၂. အရေးပျေါအခွအေနအေတှကျ ငှကွေေးစီစဉျမှု
လခစားဝနျထမျးတှဟော သူတို့လခ ၃ လစာကနေ ၆ လစာအထိကို ငှသေားအဖွဈ လကျထဲ ထားသငျ့ပါတယျ။ အလုပျပွုတျမှာ၊ ထိခိုကျဒါဏျရာရတာ စတဲ့ မထငျမှတျတဲ့ ငှကွေေးပွသနာ ကွုံရမှုမြိုး မဖွဈအောငျပါ။ လကျမထပျခငျ ကိုယျလကျထပျမဲ့သူရဲ့ အရေးပျေါငှကွေေးစီစဉျမှုကို ကွညျ့သငျ့ပါတယျ။
၃. လကျထပျပွီး ငှကွေေး စီမံခနျ့ခှဲမှု
မိသားစုတှကေို ထောကျပံ့ဖို့၊ ညီ ညီမတှကေို ကြောငျးစရိတျ ထောကျပံဖို့၊ အစရှိတဲ့ အခကျြတှကေို လကျမထပျခငျကတညျးက ကွိုတငျညှိနှိုငျးထားသငျ့ပါတယျ။ လကျမထပျခငျမှာ သငျ့ရဲ့ဇနီးလောငျးကို သငျ့ ထောကျပံ့စရာတှေ အကုနျပွောပွထားပါ။ အဲဒါဟာ ကွုံတှရေ့မယျ့ ငှကွေေးစီမံမှုအတှကျ ကွိုတငျစဉျးစားဖို့ အခြိနျ ရစပေါတယျ။
သငျ့ဇနီးလောငျးမှာလဲ ထောကျပံ့ရမယျ့ သူတှေ ရှိနမှောပါ။ အဲဒါကိုလဲ နှဈယောကျ လကျမထပျခငျ ဆှေးနှေးသငျ့ပါတယျ။ လကျထပျပွီးမှ သူ့ကို မထောကျပံ့ခိုငျးလို့ မရပါဘူး။ မိသားစုဆိုတာ လူ့ကငျြ့ဝတျအရ ထောကျပံ့ရမယျ့အရာ မို့ပါ။
လကျထပျတာဟာ တဈသကျမှာ တဈခါပဲ ကွုံရမှာပါ။ လကျထပျခွငျးမှာ ပြျောရှငျခွငျးအပွငျ စိတျအနှောငျ့အယှကျနဲ့ လောကဓံတှကေို သငျ့လကျတှဲဖျောနဲ့ တူတူ ကြျောဖွတျရမှာပါ။ အဲဒါကွောငျ့ ဗဒေငျတှကျတာ၊ ဆေးစဈတာတို့အပွငျ ငှကွေေးအမွငျကိုလညျး စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နဖူးစာကွောငျ့ ခဈြသူ နှဈယောကျ လကျထပျရပမေယျ့ ငှကွေေးပွသနာကွောငျ့ ပွနျကှဲစနေိုငျလို့ပါပဲ။
Previous: ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းကို မထိသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၀)ခု
Next: သင့်ချစ်သူကို အကောင်းဆုံး ပေးနိုင်ဖို့